Madaxda gobolada oo Ap ku cadaadinayo in dhalinyarada la siiyo magangalyo rasmi ah - NorSom News
Home Politikk/siyaasad Madaxda gobolada oo Ap ku cadaadinayo in dhalinyarada la siiyo magangalyo rasmi...
Madaxda gobolada oo Ap ku cadaadinayo in dhalinyarada la siiyo magangalyo rasmi ah
Waxaa maalintii shaley aheyd furmay shirweynaha qaran ee xisbiga shaqaalaha Ap, oo ah xisbiga siyaasadeed ee ugu weyn Norway. Shirweynaha Ap ee sanadkan 2017 ayaa ah mid isha lagu wada hayo, maadaama ay miiska saaranyihiin go´aamo masiiri ah oo qaarkood ay madaxda Ap dhexdiisa ay isku khilaafsanyihiin.
Arinta sida aadka ah loo hadalhayay labadii maalmood ee ugu danbeeyay, ayaa ah waxa uu noqon doono go´aanka Ap ee ku saabsan magangalyada kumeelgaarka ah ee la siiyo dhalinyarada kayar 18-ka sano.
Qaar kamid ah madaxda gobolada ee xisbiga Ap, ayaa shirweynaha qaran ee Ap ku cadaadinayo inay isku raacaan in magangalyo rasmi ah la siiyo dhalinyarada kayar 18-sano ee iska soo dhiibta Norway.
Sidoo kale hey´adaha ka shaqeeyo arimaha qoxootiga iyo kuwo u dooda xuquuqdooda, ayaa ka digayo cawaaqib xumo ka dhalan karto magangalyada kumeel gaarka ah ee la siiyo dhalinyarada.
Shirweynaha qaran ee Ap ayaa socon doono afar maalmood oo ku eg maalinta axada ah.
Previous articleMaxkamad kutaal Faransiiska oo diiday in qoxootiga faraha kuleh Norway dib loogu soo celiyo Norway
Next articleDowlada Sweden oo soo jeedisay in ciidamo loo diro xeebaha Soomaaliya